Pixel, iyo desktop nyowani yeRaspberry Pi Foundation ichakwikwidza naLxde | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rino takaona desktop nyowani yeGnu / Linux masisitimu, desktop isingaremi yezvikwata zvine mashoma kana mashoma masosi. Iri tafura rinonzi Pixel uye yakasikwa kwete yekuparadzira Gnu / Linux sezvazviri asi pachikuva, yemahara chikuva, Raspberry Pi.
Saka, Pixel yakavakirwa paLxde, iro risingaremi desktop iyo yandaimboshandisa asi ivo vaichinja kusvika pakuti Pixel pfumo re desktop iyi iro rinoenderera nemaraibhurari eGTK asi rakagadzirirwa rudzi urwu rwepuratifomu.
Muchidimbu tinogona kutaura kuti Pixel ndeyekusimudza chiso kweLxde, iyo facelift iyo nyowani windows, mifananidzo, mafonti uye kunyangwe nyowani mapaneru akawedzerwa kuti ashande. Chii chimwe Akateedzana maapplet akaverengerwa ayo anotendera kubatana kweWi-Fi neBluetooth kubatana sezvo parizvino iine madhizaipisi akaomarara seKDE kana Gnome. Iri basa rinoita kuti basa rive nyore nyore kune vashandisi veiyo Raspberry itsva Pi 3, iyo iine Wi-Fi neBluetooth yekubatanidza yakaiswa.
Pixel yakavakirwa paLXDE asi iine nyowani nyowani uye kutaridzika
Pixel akazvarwa muRaspberry Pi Foundation uye inoitwa neSiseko pachayo, kusvika pachinzvimbo chekuti zita rinoreva icho, nekuti Pixel izita rakapfupikiswa re «Pi Yakavandudzwa Xwindows Nharaunda, Yakareruka".
Imwe shanduko inoitwa muPixel iko kushandiswa kweimwe software. Kwete chete RealVNC inosanganisirwa asi Chromium inoshandiswa zvakare panzvimbo peEpiphany. Bhurawuza rakakurumbira reiyo Gnome chirongwa chakakwegura saka vagadziri vakasarudza iyo Chromium, inorema asi yakazara yakazara browser inoshanda zvakanaka pane dzazvino shanduro dzeRaspberry Pi.
Pixel pari zvino iripo mushanduro dzichangoburwa dze Raspbian, iyo Gnu / Linux kugoverwa kweRaspberry Pi iyo yakavakirwa paDebian 8. Mune shanduro dzakapfuura, kuve nePixel nezvose zvirimo tinofanirwa kuita inotevera mirairo:
Nehurombo, Pixel haisati yawanikwa kune mamwe magadzirirwo eGnu / Linux, asi kuita kudaro ichave inonakidza desktop iyo isiri yekushanda chete asiwo yakanaka, chimwe chinhu chinogara chichi tarisa kune vazhinji vashandisi Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Pixel, Raspberry Pi Foundation desktop nyowani kukwikwidza neLxde
edwin aguiar akadaro
Nezuro ndakagadzirisa rasipiberi iyi vhezheni yePixel pasina kana kunetsa, zvisinei chandainyanya kufarira ndechekuti ndakakwanisa kudzima wifi zviri nyore, isati yandipa matambudziko uye yakamisikidzwa nekukasira, ichikwikwidza neeth0.
Izvo zvandisina kumutsiridza yaive realvnc zvekuti haina kupokana neiyo yandinayo izvozvi uye yakauya nekutadza. Zvimwe zvese zvakanaka
Pindura kuna edwin aguiar